Noho ny tranga misy… : hahemotra ny sehon’i Lalatiana | NewsMada
Noho ny tranga misy… : hahemotra ny sehon’i Lalatiana
Fotoam-bita tsy mahaleo ny sampona… Voatery hahemotra amin’ny andro manaraka ilay fampisehoan’i Lalatiana, noho ny resaka pesta ihany.
Tsy afa-manoatra… “Noho ny toe-draharaha misy sy ny fandraràna avy amin’ny fanjakana amin’ny tsy tokony hisian’ny famoriam-bahoaka, nandray fanapahan-kevitra ny mi’Ritsoka Production sy i Lalatiana fa hahemotra ilay fampisehoana nokasaina hotontosaina ny 8 oktobra ho avy izao”, hoy ny fanambaran-dRandriamampianina Hery, talen’ny mi’Ritsoka Production.
Tsy maintsy noraisina ny fepetra mba hahafahana manao fampisehoana am-pitoniana sy tsy misy fitaintainana, aoriana. “Tsy ho ela akory ny fihaonana, fa miandry ny daty havoakan’ny tompon’andraikitry ny toerana fotsiny izahay io. Tsy maintsy miroso amin’ny fanadiovana sy ny fandrarahana fanafody ao amin’ny toerana hanaovana ny seho koa ry zareo”, hoy hatrany ny fanazavana.
Araka izany, mihemotra fa tsy foana akory ny fampisehoana. Tsy tokony hitaintaina ireo efa nahazo tapakila mialoha, satria mbola manan-kery avokoa izany, raha ny fampitam-baovao hatrany.
Tsy ny fampisehoan’i Lalatiana ihany, fa voatery hahemotra avokoa ireo seho tokony hisy amin’ity faran’ny herinandro ity. Anisan’izany ny famaranana ny lalao “Kopi Kolé”, izay tokony hatao eny amin’ny Coliseum Antsonjombe, ny alahady izao. Samy nahazo fampilazana am-bava avy amin’ny Prefet de Police manolo toerana avokoa ny mpikarakara fety voakasik’izany, raha ny fanazavana hatrany.